काँग्रेस कास्की सभापति केसी अस्वस्थ | eAdarsha.com
पोखरा, २० भदौ । नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी अस्वस्थ भएका छन् ।
सभापति केसीको आज नै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा शल्यक्रिया गरिएको उनका छोरा सरोज केसीले जानकारी दिए ।
काँग्रेस नेता केसी विगत लामो समयदेखि पिसाव नलीमा समस्या देखिएपछि बिहीबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । नेता केसीकोे वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डा. नरेन्द्र गुरुङले सफल शल्यक्रिया गरेका हुन् ।
पेल्भिक डर्माेइडबाट ग्रसित नेता केसीलाई अझै ४ दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने डा. गुरुङले जनाए ।